ဒီ function ကိုမထောက်ပံ့တဲ့ BIOS အဟောင်းနဲ့ compus CD ကနေဘယ်လို boot လုပ်မလဲ Linux မှ
ဒီ function ကိုမထောက်ပံ့တဲ့ BIOS အဟောင်းနဲ့ compus CD ကနေ boot လုပ်နည်း
ယေဘုယျအားဖြင့်, အဟောင်းတွေ PC များရှိသည် CD ကနေ boot လုပ်ခွင့်မပြုတဲ့ BIOS။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပြusuallyနာတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိသည် အနည်းငယ် distros များ သူတို့မှာဒီနေ့ရှိတယ် floppies တွေ boot လုပ်တယ် ၎င်းသည် OS ကိုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး CDROM drive ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းမှ OS ကိုထိုနေရာမှတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ Windows ကို install လုပ်ခြင်းသည် Windows boot floppy နှင့် CD မှယာဉ်မောင်းများရှိရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော် Windows floppy သည် Linux ကို boot မလုပ်နိုင်ပါ။
ကံကောင်းတာက Smart Boot Manager လို့ခေါ်တဲ့ယေဘူယျဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုက CD မှမည်သည့် operating system ကိုမဆို installable လုပ်ဖို့ bootable floppy disk တွေဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Ubuntu မှာ Smart Boot Manager ကို Install လုပ်ပါ Smart Boot Manager ကို Download လုပ်ပါ
ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပြီးလျှင် floppy disk ကို floppy drive ထဲထည့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ပါ။
sbminst -t -d0-b -u ဖြစ်ပါတယ်
မှတ်ချက်။ ။ ဖိုင်ကိုသင် download လုပ်ခဲ့လျှင်သင်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်တွဲမှဤ command ကို run ရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးပြုတဲ့ parameters တွေကိုအပေါ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, program ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » ဒီ function ကိုမထောက်ပံ့တဲ့ BIOS အဟောင်းနဲ့ compus CD ကနေ boot လုပ်နည်း
Luciano Lagassa ဟုသူကပြောသည်
ငါ floppy drive ကိုအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းနှင့် PC အဟောင်းအများစုသည် floppy drive နှင့် CD reader တို့နှင့်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။
Luciano Lagassa အားပြန်ကြားပါ
Nahh ... floppy drive သည် compus ဟောင်းတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။ ဟားဟား…
Floppy drive ကိုကွန်ပျူတာကဆက်လက်အသုံးပြုနေလျှင်ပြproblemနာမှာ USB ခေတ်တွင် floppy မည်သည့်နေရာ၌သင် floppy ကိုသိမ်းမည်နည်း၊ ထိုနေရာ၌မည်သည့်နေရာ၌သိမ်းဆည်းမည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
floppy disk ကိုနှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်သိမ်းဆည်းထားသည့် geek မရှိခြင်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
floppy disk များသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီ။ မည်သူမဆိုတွင် hehehe ကဲ့သို့သောစက်ရှိသည်ဟုငါသံသယရှိသည်
Ivan Sauza အားပြန်ပြောပါ
ငါနေဆဲဆည်ရှိသည် !!!! ဒါပေမယ့် floppy drive ကမဟုတ်ပါဘူး
Floppy Drives တွေရှိသေးတဲ့လူများစွာရှိသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ floppy drive မရှိသောစက်ပစ္စည်းအသစ်များသည် USB သို့မဟုတ် CDROM မှ boot တက်သည့် BIOS တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဘာကြောင့် Ubuntu ကိုပဲ support လုပ်ရတာလဲ ???
အနည်းဆုံး Project ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို တင်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Debian ကိုမအခြေခံသောအခြား distros များကိုအသုံးပြုသူများသည်အနည်းဆုံး Source Code ကို download လုပ်၍ ၎င်းကို compile လုပ်ပြီး install လုပ်နိုင်ပါသလား။
Krafty လေးစားစွာဖြင့်ဒီဆောင်းပါးကိုကောင်းစွာဖတ်ပါ။ ၎င်းတွင်စီမံကိန်းစာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပါ ၀ င်သည် (link ကို "ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်" ဖြင့်စတင်သောစာပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဝါရောင်ခလုတ်သည်သင့်အားစီမံကိန်း၏ download စာမျက်နှာသို့၎င်းတို့ကိုအခြား distros များ၌တပ်ဆင်နိုင်အောင်ပို့ပေးသည်။ ထို မှနေ၍ source code သာမက Linux distro ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော binaries များကိုလည်း download လုပ်နိုင်သည်။
အခြား distros တွေအကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာမင်းဆီကနေထပ်ခါတလဲလဲမှတ်ချက်ပေးတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြား distros များနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များ (KDE, etc) အကြောင်းရေးသူတွေကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်မှာပြသနာမရှိပါဘူး။ ပြianနာမှာ Debian နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများသည်အများအားဖြင့်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဝယ်လိုအားနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအလွန်နည်းသည်မှာအခြား distros, enviroments စသဖြင့်သင်ခန်းစာများရေးသားရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ Arch, Fedora သို့မဟုတ်အခြား distro အကြောင်းရေးသားရန်ဘလော့ဂ်တွင်သင်ဝင်ရောက်လိုလျှင်တံခါးများသည်ပွင့်နေပါသည်။ သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်နေပါတယ်
အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ရတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုငါအရမ်းအလုပ်များနေတယ်။
ငါလုပ်နိုင်တာကသင်မကြာခဏအခါအားလျော်စွာတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်အခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုတင်ပြရန်လိုသည်။ ဒီ ၉ နှစ်တာကာလအတွင်း Linux ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုအင်တာနက်မရှိဘဲပေးခဲ့သည်၊ ဟဟ
လာပါ၊ မင်းတို့ကိုမင်းရေးနိူင်တယ် usemoslinux@gmail.com ပြီးတော့သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြပါ။
ကြည့်ပါ၊ diskette နဲ့ floppy drives တွေ run နေတယ်။
ဒါပေမဲ့ငါပြောတာကသူတို့ဟာငါ့ကိုမကြာခဏပျက်ကွက်နေပြီ၊ ငါ့မှာ ၁၅ လမ်းမရှိတော့တဲ့လမ်း ၂ ခုရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့ hard disk ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာထည့်ထားရင်ပိုကောင်းတယ်။ DSL၊ ၎င်းကို၎င်း၏နေရာ (နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်) နှင့်voiláထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။ သင့်တွင် linux ပါသောကွန်ပျူတာရှိသည်
ကောင်းပြီ, ငါဆဲသုံးပါ! ဟားဟား! ၏သင်တန်း sooo နည်းနည်း! ငါ့မှာစက်ဟောင်း (၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ : O) ။ အဲဒါကငါ့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ့် modem အတွက် isa slot နဲ့ငါရှိတယ်၊ ငါဖုန်းခေါ်သူ ID နဲ့အဖြေဖြေစက်လိုသုံးတယ်။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပြီးအမိန့်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်စက်အသစ်ပေါ်တွင် callID ကိုသုံးသည်။ ဒါအရမ်းကောင်းပြီးတည်ငြိမ်လို့အပြောင်းအလဲမလုပ်ဝံ့ဘူး။ ထိုအရာအားလုံးဂရပ်ဖစ် mode ကိုမပါဘဲအလုပ်လုပ်!
(လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ခန့်က) ပထမဆုံး floppy drives များနှင့် diskette များသည်သံမဏိများဖြစ်ပြီးဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ယခုနောက်ဆုံး mmm .. အဘယ်သူအားမျှ။
Command ရှိ "es" သည် Smart Boot Manager menu များကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်ရန်လိုပါသလား။ အခြားဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့်ထားရန်၎င်းကို "it", "uk", "pt", "any" ဖြင့်အစားထိုးရန်လုံလောက်ပါသလား။
ဒါမှန်တယ် ... ငါထင်တယ် 🙂
MeMenu နဲ့ Message Menu ကိုဖယ်ရှားနည်း
Facebook News Feed မှမလိုလားအပ်သောအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားနည်း